Shiinaha Graphite disk koronto loogu talagalay soo-saaraha spectrometer soo saaraha iyo alaab-qeybiye | Jinglong
Adoo isbarbar dhigaya awooda calaamadaha canaasiirta ku jirta shaybaarka saliida la isticmaalay iyo midka muunada caadiga ah, cabirida walxaha tijaabada ee muunada saliida waa la xisaabin karaa, natiijooyinka baaritaanka waxaa lagu dari karaa keydka keydka ee wax ka qabashada kadib.
Qalabka korantada ee khaaska ah ee loo yaqaan 'spectrometer' saliida ayaa soo martay habka shubista heerkulka sare, waxay leedahay isku mid ahaansho wanaagsan ee daaqa; waxay u isticmaashaa garaaf nadiif ah oo sare (daahirnimo muuqaal ah) sida walxo cayriin ah, oo leh astaamaha xoogga sare, cufnaanta sare, daahirsanaanta sare, xasiloonida kiimikada ee sare, qaabdhismeedka cufan iyo labis, heerkulka sareeya ee iska caabinta, habdhaqanka sare, iwm; waxay si adag ugu hoggaansan tahay heerarka Nb / SH / t0865 iyo ASTM D6595.
Cabirka korantada cajaladda: 12.5mm dhexroor dibadda ah; dhexroorka daloolka gudaha: 3mm; dherer: 5mm;
Faahfaahinta qalabka korontada ku shaqeeya ee loo yaqaan 'graphite disk electrode' ee loogu talagalay qiyaasta saliidda:
Magaca Ingiriisiga: Sawirka garaafka
Model iyo faahfaahin: 500 kumbiyuutarro / sanduuq
Qalabka korontada ee gaarka loo yaqaan 'spectrometer oil' wuxuu leeyahay laba shaqooyin.
Muunadda ku jirta sanduuqa saliidda waxaa loo qaadayaa farqiga u dhexeeya koronto-qabadka iyo koronto-ku-wareegga iyadoo lagu wareejinayo qalabka korantada;
Marka isha qalooca oscillating isku xidho, waxay ku falcelin doontaa korontada usha si ay u soo saarto heerkul sarreeya oo deg deg ah, uumi bax una kala qaado qaybaha ku jira muunada saliida ee astaamaha gaaska, ka dibna kiciya atomyada gaaska si ay u soo saaraan khadadka muuqaalka muuqaalka ee walxaha.
Nadiifinta korantada (nijaasta) waa mid ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee laga helo dhawaqa asalka;
Nadiifnimada korantada iyo dabayshu waxay saameyn ku yeelan doontaa xasilloonida heerkulka, ka dibna saxnaanta iyo xasilloonida natiijooyinka;
Dhexdhexaadiyaha bannaanka ee korantada diskku wuxuu saameyn ku yeelan doonaa xaddiga muunadda la qaaday;
Dhexroorka gudaha ee koronto-qabadka wuxuu saameeyaa heerka wareegga iyo tirada shay-baarka la qaaday
Qalabka korontada ku shaqeeya ee loo yaqaan 'spectrometer oil';
Garaaf sare oo daahir ah (daahirnimo muuqaal ah) ayaa la isticmaalaa, kaas oo leh astaamaha xoogga sare, cufnaanta sare, daahirnimo sare, xasiloonida kiimikada sare, qaab dhismeedka is haysta iyo mid isku mid ah, iska caabinta heerkulka sare iyo habdhaqanka sare;
Hore: Oxidation rotor graphite adkaysi u degassing biyaha aluminium
Xiga: Warqad / Sawir / Sawir Sawir gacmeed
Koronto Graphite for warshad bir ah
Antimony giraanta Kaarboonka